Hlola iHague, Netherlands - World Tourism Portal
Hlola i-Hague, Netherlands
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eHaque, eNetherlands
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeHague
Bukela ividiyo ekhuluma ngeHague
Hlola iHague, idolobha elisesifundazweni saseNingizimu Holland ku abase Netherlands. Yisihlalo sephalamende lamaDashi nohulumeni, nokuhlala kweNkosi uWillem-Alexander, kepha akusona inhloko-dolobha, okuyi Amsterdam. Umasipala unabantu ababalelwa cishe i500,000, indawo enkulu yasemadolobheni ibalwa cishe yisigidi. IHague iselwandle oluseNyakatho futhi iyikhaya leScheveningen, indawo ethandwa kakhulu yolwandle eNetherlands, kanye nendawo encane yokuphumula yaseJukkin.
Emhlabeni jikelele, i-Hague ijwayele ukubizwa ngokuthi "yinhlokodolobha yezokwahlulela zomhlaba" ngenxa yezinkantolo eziningi zamazwe ezisedolobheni. Kulezi kukhona iNkantolo yezoBulungiswa yamazwe omhlaba, i-International Criminal Tribunal yangaphambili Yugoslavia futhi, kusukela i2004, kanye ne-International Criminal Court. Ngaphandle kwalezi zikhungo, iHague iyikhaya lezinhlangano zamazwe angaphezu kwe-150, kanye nezikhungo eziningi ze-EU, izinkampani zamazwe ahlukahlukene kanye namanxusa. Lokhu kunikeze idolobha umlingiswa ohlukile wamazwe omhlaba - lowo ohluke kakhulu e-Amsterdam. Esikhundleni sokuba nezivakashi eziningi zakwamanye amazwe kanye nalabo abafuna inhlanhla bakhangwa idumela le-Amsterdam lokuthokozela nenkululeko, i-The Hague ngokuvamile inabahambi abaningi abasebenza futhi abahlala edolobheni ngenxa yesibalo sezikhungo nezinkampani zomhlaba jikelele. Ngenxa yalokhu, i-The Hague idume njengedolobha elinothile, elondolozayo nelinodlame ngandlela thile.
IHague ayinakho kangako ukuqina nokuthokozela kwe-Amsterdam; noma kunjalo, ihlinzeka kahle izakhamizi zayo ngezindlela ezihlukile, njengezindawo ezinkulu zesikhala eluhlaza, 11 km yogu lolwandle, imigwaqo ekhangayo yezitolo kanye nendawo ebanzi yamasiko. Esikhundleni sokuba nemisele efana namanye amadolobha amaDashi, i-The Hague inemigwaqo nezindlela ezivulekile kancane ukwedlula ezakwelinye izwe, okunikeza idolobha ukuzizwa okuzwakalayo ezweni lonke. Esikhundleni sendlu ejwayelekile yokuvuselelwa komhlaba ye-Dutch 17th-century, inezindawo zokuhlala ze-18th century in izitayela ze-baroque kanye ne-classicist. Idolobha lithathwa ngabaningi njengabasesabelweni sezwe. Ngaphandle nje enkabeni yedolobha, omakhelwane be-posh basebenzisa ukubukeka okuningi kwekhulu le-19th nge-eclectic kanye ne-art nouveau yezakhiwo.
Uma udlulela phambili ukusuka olwandle ngaphambili nasenkabeni yedolobha, kodwa, izindawo ezomakhelwane zivame ukuncipha. Umugqa owodwa ohlukanisayo phakathi kwezindawo ezicebile nezesikebhe udonswa abanye eLaan van Meerdervoort, ohamba ngokufana nolwandle. Izindawo ezikude nolwandle zivame ukuba nokuncane kakhulu ngendlela yendawo eluhlaza.
IHague inikela ngezakhiwo ezinhle kakhulu, kusukela esakhiweni esihle sikahulumeni seBinnenhof, iye ezindlini ezinhle naseLange Voorhout. Iminyuziyamu efana nesikhundla seMauritshuis ihamba phambili phakathi kwezwe. Nge-aficionados yokudla, i-The Hague inikezela ngokudla okuphezulu kakhulu kwase-Indonesia ezweni, ngenxa yokufika kwabantu abaningi kusuka kuleli koloni langaphambili laseDashi. Idolobha liphinde linikeze amathuba amahle okuphuma, njengezikhala ezinwebekayo eziluhlaza zokuhamba ngamabhayisekili kanye nezindunduma nezindawo zokuzilibazisa zasolwandle okuyi-tram nje ezimbalwa ukusuka enkabeni yedolobha. IHague futhi inikezela ngezinto ezimbalwa ezikhangayo ikakhulukazi ezinganeni, njengedolobha elincane laseMadurodam kanye ne-360 degree Omniversum cinema.
Eminyakeni eyedlule ye-10, idolobha selibe nesibalo esikhulu sentuthuko ngendlela yamaphrojekthi wokwakha anamuhla. Ukwakhiwa kwakamuva kufaka iCity Hall kanye neCentral Library ngumakhi waseMelika uRichard Meier, uDe “Snoeptrommel” (owaziwa ngabantu bendawo njengeCandy-Box) - indawo yokuthenga eyindilinga eduze kwehholo ledolobha elidala, neqoqo lezitini zangemva kwesimanje -Imibhoshongo yehhovisi eliphakathi kwehholo ledolobha nesiteshi sesitimela i-Centraal, esihlinzeka ngezindlu ezintsha zezinkonzo eziningi. Ukuthuthuka okukhulu kwengqalasizinda kube ukwakhiwa komhubhe ongaphansi komhlaba ongaphansi kweGrote Marktstraat, osetshenziswa ngamathamu avamile, kanye nohlelo olusha lwesitimela, olwaziwa ngeRandstadRail, oluxhumanisa i-Hague namadolobha asondele e-Zoetermeer kanye Rotterdam.
Iphrojekthi enkulu yokwakhiwa kabusha endaweni ezungeze isiteshi sesitimela i-Centraal. Lapha, ama-skyscrapers afana ne-142 m Hoftoren akhuphuka ngaphezu kwedolobha futhi eminye imibhoshongo eminingi ephezulu isakhiwa.
IHague yabelana ngesikhumulo sezindiza Rotterdam.
Kusukela i-The Hague yasungulwa kumuntu owayekade ukuzingela, kunezindawo ezinhlobonhlobo zamapaki nezindawo eziluhlaza ezilungele ukuhlolwa. Njengamadolobha amaningi eNetherlands, i-The Hague inobungani ngokweqile ngebhayisekili futhi kulula ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye ngebhayisekili uma uzizwa sengathi ungaphuma phakathi enkabeni yedolobha. IScheveningen (futhi ngokwezinga elincane leJakkduin) iyindawo yokuphumula yolwandle ematasa egcwele amakhefu e-boardwalk futhi eduze nezindunduma. Izinyanga eziphambili zokuphuma futhi zibone iThe Hague ngezinyawo noma ngezinyawo zisekupheleni kwentwasahlobo, ihlobo, nezinyanga zokuqala kokuwa; vele wazi ukuthi indawo engasolwandle ingagcwele kakhulu njengoba izivakashi ezivela kulo lonke elaseYurophu zizovakashela futhi zibheke ngasogwini lolwandle oluseNyakatho.
IPark Clingendael - Lapho isisendaweni eyake yaba yindawo yokuhlala, ipaki yaziwa kakhulu ngengadi yayo yaseJapan, enye yezindala (i-1910) yakudala eYurophu. Ngenkathi ingadi ivulwa kuphela kusukela ngasekupheleni kuka-Ephreli kuya maphakathi noJuni, indawo ezungezile ivulekile unyaka wonke futhi imahhala izivakashi.
IWestbroekpark - Ipaki yesitayela sesiNgisi ukusuka kuma1920s. Yaziwa kabusha ngeRosarium noma ingadi yayo yasendulo, enezinhlobo ezihlukene zama-rose eziqhakaza kusuka ngoJuni kuze kube nguNovemba. Ipaki ifaka indawo yokudlela enokubukwa okuhle.
IHaagse Bos - Le Paki yindawo yakudala enamahlathi ezweni. Isuka endaweni engaphansi kweWassenaar iye empumalanga esenyakatho-mpumalanga bese iya ngasesangweni lesikhungo seCentraal Station, lapho kunendawo encane ebiyelwe enamazolo. IHaagse Bos nayo inesidleke esikhulu sezinyoni ezakhiwe phezu kwesigxobo lapho umasipala wendawo uphumelele khona ngokuheha izimbotshana zezingulube ngoba ugwadule luphawu lwedolobha. I-Haagse Bos nayo iqukethe isigodlo seNdlovukazi iHuis Bosch eyishumi.
IScheveningse Bosjes - Ipaki eduze kwaseScheveningen igxile echibini elincane, iWaterpartij. Ikhaya le-Indiëmonument, elikhumbuza izisulu ezingamaDashi ngokuhlala kwabantu baseJapan eDutch East Indies.
Wassenaar - Lesi sigatshana sase The Hague singumasipala ocebile kakhulu ezweni. Izindawo ezinkulu ezinamahlathi zinamabhayisekili nezindlela zokuhamba futhi zigxililezwa ngezilinganiso ezinkulu. Lesi sikhungo sinezindawo zokudlela ezimbalwa nezitolo futhi siseduze nolwandle.
UDuinrell, (eduze nedolobhana laseWassenaar). Le paki yokuzijabulisa ihloselwe izingane ikakhulu kodwa inendawo yokuhlala kanye nokuhlala isikhathi eside njengoba iseduze nolwandle. Izindunduma ezungezile nezindawo ezinamahlathi zinhle ngokuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngamabhayisekili kanye nokuhamba ngebhayisekili.
Ugu lolwandle oluseNyakatho. Izikhungo zehhotela eScheveningen naseJakduin zinokufinyelela olwandle, izindunduma, kanye nezindawo zokudlela zasolwandle namakhekhe. Qiniseka ukuthi ubheka iScheveningen Pier, pier enkulu kunazo zonke eNetherlands, enombhoshongo wokubheka we-60 m (200 ft), jumping bungee, nekhasino nendawo yokudlela. I-Scheveningen igcwala ehlobo, ngakho-ke zama i-Kijkduin uma ufuna okuthile okunokuthula okuthe xaxa.
Kusihlwa kwe-29th ka-Ephreli. Ngenkathi i-Amsterdam ngokuvamile yaziwa ngokuba nomgubho omkhulu wezwe woSuku lweNdlovukazi yamaDashi nge-30th ka-Ephreli, eminyakeni yamuva nje i-The Hague ibambe iqembu elikhulu kakhulu okulindelwe ngalo izolo ebusuku. I-KoninginneNach (Ubusuku bukaQueens 'ngolimi lwesiThe Hague) inama-band kanye nemiboniso yokunikeza ka-DJ ezindaweni ezihlukene ze-5 enkabeni yedolobha.
IScheveningen International Sand Sculpture festival. Meyi.
IScheveningen International Fireworks festival. Agasti.
NgeSonto eledlule likaJuni. Umkhosi omkhulu womculo we-pop omkhulu, wamahhala wosuku olulodwa obanjelwe eZuiderpark. Iheha cishe izivakashi ze-400.000 unyaka ngamunye, cishe abantu abaningi njengoba empeleni behlala edolobheni, okwenza umkhosi ube mkhulu kunawo wonke emhlabeni.
I-North Sea Regatta. Ukuphela kukaMeyi / Ukuqala kukaJuni. Umncintiswano wokuhamba ngomkhumbi owenziwa emhlabeni wonke wabanjwa ogwini lweScheveningen.
I-Tong Tong Fair. Ukuphela kukaMeyi / ukuqala kukaJuni. Lokhu bathi kungumkhosi omkhulu kunabo bonke e-Yurobhu emhlabeni. Kusukela kwashicilelwa okokuqala kwi-1958 kube ngumcimbi ophindwe kabili kanye nendawo yokuhlangana yomphakathi omkhulu weDashi-East-Indian wezwe. Umkhosi ubuye ukhange abantu abaningi bangaphandle, abaza ukusampula cuisine wase-Indonesia kumahholo amakhulu okudla, balalele umculo, bathenge ukudla, izingubo zase-Indonesia nepharafernalia bazazise ngesiko lase-Indonesia. Umkhosi ubanjelwa ematendeni amakhulu eMalieveld, maqondana neCentraal.
UDen Haag Sculptuur. NgoJuni, Julayi noJulayi. Ukuvezwa kwamahhala kwesiLange Voorhout ngezindikimba ezahlukahlukene unyaka ngamunye.
INorth Sea Jazz festival. Impelasonto yesibili kaJulayi. Ngemuva kokubanjwa eThe Hague ngeminyaka ye-30, lo festival odume umhlaba wonke manje (i-2006) uthuthele eRotterdam ngenxa yezinkinga zokuhlala e-The Hague.
Jazi bukhoma. Kunenqwaba yabaculi be-jazz eThe Hague, futhi ungabezwa kanye nabanye (abaculi) bomculo wesizwe abadlala edolobheni!
Okwesithathu ngolwesibili ngoSepthemba. IPrinsjesdag noma 'Usuku lwamaPrincess' luphawula ukuqala konyaka omusha wePhalamende. Ngalolu suku, izixuku ezinkulu zidonswa uhambo oluyinkambo olwenziwa yiNkosi uWillem isuka esigodlweni sayo eNoordeinde iye eHholo lakwaKnight eBinnenhof. Wenza uhambo lwakhe e-Gouden Koets (I-Golide Yenqola), isipho esivela kubantu base-Amsterdam esiya kugogo wakhe omkhulu uWilhelmina wase1903. Le nqola isetshenziselwa lo mcimbi okhethekile. Ehholo laseKnight's, iKing Ngemuva kwalokho yenza umsebenzi wayo njengenhloko yombuso ngokufunda iTroonrede (Inkulumo Yesihlalo Sobukhosi) emagumbini aqoqiwe ePhalamende. Inkulumo yobukhosi iqukethe isifingqo sezinqubomgomo iKhabhinethi ezihlela ukuyisebenzisa ngonyaka olandelayo.
Ukuwela Umngcele Womkhosi. Novemba.
Umkhosi wanamuhla wezobuciko. Ngempelasonto edlule kaSepthemba. Umkhosi Wezwe Ngaphezulu Kwezobuciko.
Isikhungo esiphilayo nesingokomlando seThe Hague silungele usuku lokuthenga. Indawo yezitolo ezungeze iSpoistraat neGrote Marktstraat imatasa izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Iningi lezitolo ezinkulu zomnyango zitholakala kule ndawo yezitolo.
UMaison de Bonneterie, Gravenstraat 2. Isitolo semfashini esinamakha ngaphakathi kwesakhiwo esiphethwe ngengilazi esakhelwe ku-1913. Izitolo ezinjengoBurberry, uHugo Boss, uRalph Lauren, nabanye banamathela esixukwini esikhulu. Baphinde babe nabaphenyi kuNdlovukazi uBeatrix uqobo!
UDe Bijenkorf, iWagenstraat 32 (ekhoneni iGrote Marktstraat). Lesi sitolo esiphakathi emanani entengo ephakathi nomnyango abizayo sibekwe esakhiweni esikhulu esivela e-1924, sakhiwe ngesitayela sokubonisa esiyingqayizivele ngesitini nethusi. Bheka amafasitela agcwele ingilazi esitebhisini. Indawo yokudlela 'La Ruche' esitezi sesithathu inokubuka okuhle kwendawo ezungezile.
Ungathola ukuyothenga okungcono eThe Hague emigwaqweni eseceleni eyindilinga ukusuka enkabeni yedolobha. Ngenkathi eziningi zazo zisezingeni eliphezulu, ungathola izitolo ezimbalwa zezingxoxo ezichazwe lapha nalaphaya.
I-De Passage - Igalari yezitolo eyimboze eyingqayizivele eyakhelwe e-1882, nesakhiwo sodade eBrussels. Lapha ungathola ukuthenga okukhethekile nemfashini ye-upmarket. Bheka amathofi angaphandle ngaphandle kweBuitenhof.
UDe (Ibhokisi Lepipi), (eduze kwe-Oude Stadhuis). Lesi sakhiwo siseduzane nendawo ethengisa izinto zaseHoogstraat. Abantu bendawo bayibiza ngokuthi “Ibhokisi Lepipi” ngenxa yangaphandle eyingqayizivele. Iqediwe i-2000, ingesinye sezakhiwo ezintsha edolobheni.
I-Prinsestraat - Izitolo ezikhethekile, zokudlela kanye nezindawo zokudlela endaweni ezungeze lo mgwaqo, phakathi kweGrote Kerk nesigodlo saseNoordeinde.
Izinyawo, ezitolo zemigwaqo ezinezitolo ezinkulu ezincane. Eminye imigwaqo enganqeni kwale ndawo enezitolo ezifanayo yiVlamingstraat, iVenestraat neWagenstraat.
Isikhungo Sezincwadi saseMelika, iLange Poten 23. Lesi sitolo esiyingqayizivele sithengisa izihloko ezintsha nezesiNgisi ezisetshenziselwa ukwengeza kubantu abakhona. Uma uhudula amanye amakhophi ezincwadi kulo lonke elaseYurophu, kepha ungafuni ukuzilahla, zama ukuwahweba lapha.
UDenneweg noNoordeinde. Le migwaqo yezitolo iqondana ukusuka kolunye uhlangothi lweBinnenhof. Esidala sinama-antique, i-bric-a-brac, kanye nezindawo zokudlela ezimbalwa ezithandekayo nezitolo ezikhethekile zokudla, kuyilapho owokugcina esaziwa ngama-boutiques kanye ne-haute couture.
ILange Voorhout. Lo mgwaqo awunazo izitolo eziningi, kepha kukhona umgwaqo wakudala omuhle onemakethe ebuya masonto onke.
I-Antique & Book Market. 10.00-18.00. Manje uma ufuna izikhumbuzo ezinhle zoqobo ongaletha kubangani bakho, khona-ke le indawo enhle ongaya kuyo: Njalo ngoLwesine kanye / noma ngeSonto kukhona i-Antique neBhuku Emakethe, lapho ungathola khona izipho zokuqala zaseDashi. Esikhathini esiningi, kukhona nendoda lapho (iCornelis) ethengisa imidwebo emincane yezandla yezindawo ezingamaDashi kuphela nge- € 5 ucezu olunikeza isipho esihle. Imakethe alilikhulu kangako, ngakho-ke mbhekele futhi uzombona kalula.
Njengoba nje izindawo zokudlela zamaNdiya zande e-UK, iNetherlands inesiko elihle kakhulu ekudleni oku-Indonesia kanye ne-Dutch-Indies cuisine. Ngemuva kokuthi i-Indonesia izimele eNetherlands e1945, izwe lathola inani elikhulu lamakholoni angaphambili avela eDutch kanye nemvelaphi exubile eyayiphoqelelwe ukushiya ikoloni elalizimele. IHague ithole isibalo esikhulu salaba bantu futhi isisizinda somphakathi waseDashi-Indonesia.
Amabha kanye nama-Pubs
IGrote Markt yindawo yokuhamba yokuphuza nokudla lapho uvakashela iThe Hague. Amabha amaningi ahlukahlukene, izindawo zokudlela kanye nama-pubs atholakala kule ndawo eyingqayizivele, khona maphakathi nedolobha le-The Hague.
Ku- "Plein" uzothola ama-nightclub ahlukahlukene. Iningi lamakilabhu lapha empeleni yiindawo yokudlela ephenduka iklabhu ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku (amanye amaklabhu avuliwe ngoLwesine). Ukungena kuvame mahhala, ngaphandle kwamaqembu akhethekile. Amanani eziphuzo afana kakhulu kuwo wonke amakilabhu. I-"Plein" ithambekele kancane kunendawo ebizwa ngokuthi yi "Grote Markt" ngakho-ke lindela amantombazane agqoke kahle nabafana abagqoke izingubo ezijwayelekile zephathi. Imvamisa amaklabhu avulwa nge-23: 00.
Hlola i-Hague, abase Netherlands kodwa futhi phuma
Amadolobha e-Quaint anjengeDelft, aziwa ngobumba lwawo oludumile oluhlaza okwesibhakabhaka, nedolobha laseyunivesithi iLeiden yimizuzu nje ye-15 ngesitimela.
I-Delft - Idolobha elihle kunazo zonke elinezintambo zomsele elihlotshiswe kakhulu emhlabeni. Ikhaya lezimbiza ezidumile zeDelft Blue (noma iDelftware), nekhaya le-Baroque painter uJohannes Vermeer.
Leiden - Leli dolobhana lifaka isimangalo eyunivesithi yakudala eNetherlands, Leiden University, eyasungulwa e1575. Yisikhungo sedolobha esikhulu kunazo zonke sekhulu le-17th century ngemuva Amsterdam. Ikhaya kuminyuziyamu eminingi ethokozisayo.